Galicia dia te hitarika ny famokarana angovo azo havaozina any Espana | Fanavaozana maintso
Galicia dia te hitarika ny famokarana angovo azo havaozina any Espana
Tomàs Bigordà | | Biomassa, Herin'ny rivotra, Angovo geothermal, angovo hydraulic, Angovo azo havaozina
Andriamatoa Alberto Núñez Feijóo, filohan'ny Xunta resy lahatra fa i Galicia, "angamba miaraka Castilla y León", dia hitarika ny famokarana angovo azo havaozina amin'ny taona ho avy.
Amin'izao fotoana izao, mikasika ny sehatry ny rivotra, ny tondrozotra Xunta de Galicia dia mieritreritra fa amin'ny 2020 miasa eo akaikin'ny herin'ny 4GW.
Ny tanjona dia ny hahatratra 6.000 megawatt ao anatin'ny folo taona ho avy, noho ireo fotodrafitrasa voalaza ao amin'ny lalàna momba ny fandraharahana vaovao. Raha ny filazan'ny Xunta dia midika hoe a taloha sy aoriana ho an'ireo rehetra te hampiasa vola any Galicia, eo amin'ny sehatry ny havaozina nefa koa amin'ireo sehatra hafa mandroso amin'ny toekarentsika.
Anisan'ireo zava-baovao nodinihin'ity lalàna ity ny filoham-paritra nanamafy fa mametraka endrika hanavahana ireo tetikasa indostrialy heverina fa tombontsoa manokana ho an'ny fiarahamonina. Amin'izany fomba izany dia ezahina hampiroborobo ny hakingana fitantanana amin'ny fikirakirana.
Raha ny marina, valan-javaboary 18 sahady no efa nambara fa tetikasa mahaliana manokana, izay 12 no efa nahazo alalana. Amin'ny farany, ny zavatra tadiavinay orinasa hampiaran'i Galicia, dia nanampy ny filoham-paritra, ankoatry ny fanasongadinana izany Ny angovo azo havaozina manome ny 90% ny herinaratra lanin'ny Galisiana izy ireo, ary misolo tena ny 4,3% amin'ny harin-karena faobe ao amin'ny faritany.
Ny zava-baovao iray natolotry ny lalàna momba ny asa aman-draharaha dia ny famoronana tamin'ny volana oktobra lasa teo ny firaketana ny rivotra galisiana, izay efa nisy firaketana fangatahana famonoana 1,126 megawatts.
0.1 Fambolena rivotra Malpica
1 Mampiroborobo amin'ny angovo azo havaozina hafa
1.1 Paikady fampiroboroboana biomassa
3 Araraoty ny geothermal
Fambolena rivotra Malpica
Andriamatoa Feijoo, nanararaotra ny fitsidihany nametraka ny toeram-pambolena rivotra Malpica ho ohatra iray amin'ny tetik'asa izay misy "fanoloran-tena telo heny": tontolo iainana, munisipaly - satria mamela ny famoronana asa any amin'ireo filankevitra ao amin'ny faritra izany, ary farany, manamafy ny fanoloran-tenan'ny governemanta ho an'ny havaozina, izay valan-javaboary faharoa naverina repowered ao amin'ilay faritra.
Mampiroborobo amin'ny angovo azo havaozina hafa
Tsy ny herin'ny rivotra ihany no zava-dehibe, fa ny Xunta koa dia manandrana mampiroborobo ny angovo azo havaozina hafa. Raha ny tena izy, any Galicia dia misy ny rotsak'orana avo lenta ary, noho izany, ny angovo avy amin'ny masoandro dia tsy dia mahomby, nanolotra paikady hanatsarana ny angovo biomassa izy. Ny valin'ny fifandanjana dia izay Amin'ny faran'ny 2017, ny fametrahana boiler biomassa maherin'ny 4.000 ao amin'ny trano dia tohana.
Paikady fampiroboroboana biomassa
Vinavinaina fa ny tombom-barotra tahiry izay azon'ireo rehetra mahazo tombony amin'ity paikady ity dia mety hahatratra 3,2 tapitrisa euro amin'ny volavolan-dalàna momba ny angovo isan-taona, ankoatry ny diesel 8 tapitrisa litatra. Ity dia handray anjara amin'ny fihenan'ny CO24000 2 taonina amin'ny atmosfera.
Iberdrola dia nahavita tamin'ny taon-dasa ny fanitarana ny famokarana herinaratra elektrika lehibe indrindra ao Galicia, taorian'ny nananganana ny orinasa vaovao San Pedro II, nitokana avy amin'ny filohan'ny orin'asa herinaratra, Ignacio Galán, ary ny filohan'ny Xunta de Galicia, any Sil Basin, any Nogueira de Ramuín (Ourense).
Ny fanirahana an'ity toerana ity dia misy ny fanitarana ny toeram-pamokarana herinaratra Santo Estevo-San Pedro, natao hatramin'ny taona 2008 ary 200 an-tapitrisa ary efa ho 800 ny olona no nahazo asa.
Araraoty ny geothermal
Manankarena ny tany galisiana, mamokatra zavamaniry sy endrika miavaka izy io, fa ny tany ambanin'ny tany koa tsy manam-paharoa amin'ny fitehirizana harena, amin'ny ankamaroan'ny fotoana very maina. Ho fanampin'ny mety ho hafanana, tsy maintsy ampidirintsika ny harena geothermal.
Araka ny fanadihadiana maromaro, Galicia dia afaka nitarika ny revolisiona vaovao amin'ny fampiasana angovo geothermal, tsy hoe loharanon'ny hafanana fotsiny fa ho loharanon'ny famokarana herinaratra.
Androany, ny geothermal galisiana dia efa mpitondra nasionaly. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Acluxega (Association of the Xeotermia Cluster of Galicia), ny vondrom-piarahamonina tamin'ny 2017, ny tarehin-rafitra 1100 an'ny fanamainana hafanana miaraka amin'ny paompy hafanana. Ity tarehimarika ity, miniscule raha ampitahaintsika amin'ireo firenena lehibe ao amin'ny kaontinanta eropeana, fa olo-malaza eo amin'ny sehatra Espaniola.
Mikasika ny fahefana mafana napetraka tanteraka, novinavinaina fa tamin'ny faran'ny 2016 tany Galicia dia nahatratra 26 megawatts teo ho eo ny tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Galicia dia te hitarika ny famokarana angovo azo havaozina any Espana
Sina dia mitarika ny fitarihan'i Eropa amin'ny angovo azo havaozina
Pamplona dia hanohana ny fanjifana tena amin'ny trano mahazatra